Muxuu yahay hadalka la dhibsaday ee uu jeediyay Sheekh Saciid Raage? | YoobsanNews.com
“Inta badan dadka aan la kulano, gaar ahaan Amerikaanka asaal ahaan ka soo jeeda Afrika ma garanayaan aabayaashood, intooda badan waxay ku dhasheen galmo hal habeen dhexmartay waalidkooda”, ayuu yiri Sheekh Saciid Raage.
“Khudbadda salaadda Jimcaha waxaa loogu talo galay in sare loogu qaado wacyiga dadweynaha ee ma ahan in lagu waxyeleeyo bulsho dhan, Afrikaan Amerikaanka waxay wax badan kusoo kordhiyeen Islaamnimada dalka Mareykanka, waxaana loo baahan yahay in uu hadalkaas ka towbad keneo oo uu raaligelin ka bixiyo”, ayay cullimada masjidkaas ku qoreen bartooda Twitter-ka.
“Qofkii ugu horeeyay ee cambareeyay hadalkaas wuxuu ahaa qof dumar ah oo Soomaali ah, in Sheekha uu hadalkaas yiraahdana waa wax aad looga xumaado oo aan la aqbali karin”, ayay tiri qof magaceeda ku sheegtay Xaawo oo adeegsada barta Twiter-ka.
Waxaa uu sheegay in qofwalba oo ban’iaadam ah uu khalad galo, isagana uu kamid yahay dadkaas, ixtiraam weynna uu u hayo dadka Afrikan-Amerikan.
“Hadalka afkeyga ka soo baxay wuxuu ahaa mid khaldan, uma maleynayo, mana aaminsani in dadka Afrikaanka ah ee degan Mareykanka ay yihiin kuwa garac ah, waxaan Alle ka baryayaa in uu i cafiyo, waxaana raaligelin ka bixinayaa hadalkii aan iri “, ayuu Sheekh Saciid Raage ku sheegay muuqaal uu soo duubay.
Previous: Wasaaradda Dhalinyarada iyo isboortiga oo ka soo hor jesatay Muxaadarada, Umul ku qabanayo Garoonka Eng. Yariisow..
Next: Israa’iil iyo Iiraan oo qarka u saaran dagaal fool ka fool ah